गणतन्त्रपछि नेतासँग अख्तियार पराजित, किन चलेन् भ्रष्टाचारी नेतालाई मुद्दा ? – www.agnijwala.com
गणतन्त्रपछि नेतासँग अख्तियार पराजित, किन चलेन् भ्रष्टाचारी नेतालाई मुद्दा ?
काठमाडौं । गणतन्त्र आएको १० बर्ष भयो गणतन्त्रमा जनता र देेशको अबस्थामा सुुुधार आएको छैन ।कुरो गर्‍यो कुराको दुख दुई महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवैभन्दा बढि भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्रमा हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । तर अख्तियारले विगत १० बर्षदेखि कुनैपनि राजनीतिक दलका नेतामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सकेको छैन ।
केही बर्ष पहिले तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले ४५ जनाभन्दा बढि पूर्वमन्त्री र सांसदलाई पत्र काटेका थिए । कार्कीले पत्र काटेलगतै उनीबिरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । यही त्रास हाल अख्तियारमा रहेको छ । महाअभियोग लगाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफुहरुलाई हटाउन सक्ने भएपनि अख्तियारका आयुक्तहरु राजनीतिक भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन थालेका छन् ।
आखिर किन होला राजनीतिक भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति ?
भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रसेवक उच्च कर्मचारीभन्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका केही नेताको जीवन शैली भड्किलो छ । नेताले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पति कमाएको सार्वजनिकरुपमा नागरिककालाई थाहा हुँदा पनि अख्तियारले आँखमा पट्टी बाँध्ने गरेको छ । ‘राजनीतिक नेताका पछाडी कार्यकर्ताको भीड हुन्छ’, पूर्वप्रशासकहरुको भनाइछ ‘नेताका पछि अरिंगालको भीड हुन्छ, अख्तियारले चलाए अरिंगाल खनिन्छ, तर कर्मचारीका पछाडी कुनै भीड हुँदैन, त्यही भएर नेताहरू कारवाहीमा पर्दैनन् ।